ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ကျွန်တော်မမေ့နိုင်သော ဆယ့်ကိုးဇူလိုင်
ကိုယ်တတ်နိုင်စွမ်းတဲ့ ကဗျာ စာပေ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ နဲ့ "၁၉ဇူလိုင်"အမှတ်တရ အလေးအမြတ် ဂါရဝပြုကြ တဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအားလုံး အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ။
Now, I know more about martyr's day because of ur post. I heartly appriciate that but it can be only half as all our heart could only beat half instead of their's normal tempo today and all our heads could only up in half way, too.
ကော်ပီကူးပြီး ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်ခွင့်ပြုပါနော်...............